Iimpawu zeParadigm kunye nendlela abanceda ngayo ekuziphatheni
by UDkt. Sanjay Parva
Ndiye ndazibona zihlandlo ezimbalwa, kwaye ndiyathemba ukuba abanye benu bebonile kwakhona-umfanekiso wesintombazana, intombazana enhle, ekhangeleka kumgama ohlukileyo, kubonakala ngathi yinkwenkwe endala, ibhinqa. Lo mfanekiso uphinde uboniswe kwincwadi kaStephen R. Covey, i -7 Habits of People Effective Effective . Nangona uStephen, oneminyaka engaphezu kwama-25 yamava asebenzayo nabantu abashishini, iyunivesithi, kunye nomtshato kunye neentsapho zeesetyenziselwano, ubhekisela umfanekiso kumxholo ohlukeneyo, ingqwalasela ephambili yendlela owujonga ngayo lo mfanekiso ujikeleze into ephela yinto yonke - Paradigm Shift.
Ngowe-1962, uThomas Kuhn wabhala i -Structure yeScientific Revolution , waza wazala, wachaza waza wandisa abantu "ingcamango yokujika." U-Kuhn wathi ukuqhubela phambili kwezesayensi akuyiyo into yokuziphendukela kwemvelo, kodwa kunoko "uchungechunge lwezoxolo oluqhotyoshelweyo olwenziwe ngumoya olwenziwe ngogonyamelo", kwaye kulezo zintlupheko "enye imbono yehlabathi iyalithatha enye indawo."
Ukutshintsha kwe-Paradigm yintshintsho esuka kwindlela enye yokucinga komnye, kwaye unokufaka isicelo kunoma yini ehlabathini - umsebenzi wakho, ubomi bakho obatshatileyo, ubudlelwane bakho, ikhaya lakho, indawo ejikelezileyo, kwaye kubaluleke kakhulu, impilo yakho. Imiqondiso iyasijikeleza. Kwaye nantoni na, malunga nawe, ngaphakathi kwakho kufanayo ixesha elifanayo. Kodwa ke, yintoni ishintsho sakho sengqondo kuzo zonke ezi. Okulungileyo okanye okubi , kwaye okulungileyo okanye okubi, isimo sengqondo sichaza indlela izinto ezibonakala ngayo kuwe.
Abanye benu bayamthiya inyanga yesantwasahlobo kuba lizisa umkhuhlane kunye nalo, kodwa abanye benu abashiywe ngumkhuhlane, njengaye.
Ngaloo ndlela, ngenxa yomoya othile ovuthayo yi-nemesis, kodwa ekuphumeni kwayo kulungile, inkondlo ishukunyiswa, inothando emoyeni kwaye unjani? Isikhathi sentsasa sihlala sisigxina. Akunakupheka. Kuqhubeka rhoqo ngonyaka. Akukho nonyaka xa isantwaba sishiya. Kodwa ke, yintoni ishintsho yindlela yakho ngayo.
Kunyaka owenziwe, xa umkhuhlane ungakutholi, ungathanda intwasahlobo. Oko kukutshintshwa kweparadim.
I-Paradigm Shift iSebenza Konke
Njengoko ndithethile ngasentla, ukuguqulwa kwepardigm kusebenza kuyo yonke into. Kwaye ukuguqulwa kweparadim kuyinto rhoqo. Ubona kangakanani na, uyazibandakanya, okanye usebenzise ukuba kuxhomekeke kwindlela owamkela ngayo ukuba uyatshintsha.
UKuhn uthi " ukuqwalasela kubaluleke kakhulu kuzo zonke iinguqulelo ezamkelekileyo." Konke kuqala engqondweni yomntu. Ingqondo ibalulekileyo kwimpilo yakho. Ingqondo ephazamisayo iphakamisa umzimba ophazamisayo, kwaye xa umzimba uphazamiseka, uphazamisa ingqondo. (Unokufumana ininzi kwengqondo kule ndawo kwenye indawo - ukubeka uphando okanye ukukhwaza nje). Kuhn uqhubeka uthi into esiyibonayo, nokuba ingaqhelekanga okanye i-metanormal, iyakwazi okanye ayikho nto, iyaxhomekeke kwimingcele kunye nokuphazamiseka okuveliswa yifa lethu kunye nemimiselo yoluntu. Nangona kunjalo, asiyikuthintela oku ngenxa yokuba sinokutshintsha. Sihamba ngesantya esiphuthumayo sesantya kwaye isimo sethu sengqondo siyaguqula kwaye sidlulele. Uninzi luvusa njengoko ukuqonda kwethu kwandisa.
Ngamanye amazwi, uKuhn mhlawumbi uthetha ukuba ngokuvuswa kwamanye, sinokuqonda ukutshintsha kweparadim.
Siyakwazi ukubona ukuguquka kweparadim ukuya kumzi wethu nangengqondo, impilo enhle okanye embi. Iparadigm yombono kunye nemigaqo yemigaqo. Xa ezi zimbono kunye nemithetho zilungile, zibhetele. Nempilweni. Imithetho 'enempilo' enjalo iphucula ukulawulwa kwemvelo yomzimba wethu. Ngokukhawuleza, oku kubizwa ngokuba yimfundo ye-somatic. IsiSomatic, kuba sisebenzisana nokuqonda komzimba "ngaphakathi"; imfundo, kuba ihambelana nemisebenzi yokuvuselela.
UThomas Hanna ube ngumphenyi oyintloko kunye nomcebisi kwintsimi ye-somatics, kwaye sele esebenze ngokusisiseko-oko akuthethayo-ukuziphilisa ngokuzikhethela "ngakwelinye icala kwicala lokuguqula" ekuphiliseni.
UHanna uthi: "Kukho iindlela ezimbini ezihlukeneyo zokubona nokusebenza kwiinkqubo zobomi: okokuqala, umntu unokubona umzimba kwaye enze umzimba; Okwesibini, umntu unokubona i-soma aze enze iseshoni.
Umzekelo wokuqala ngumbono womntu wesithathu obona umzimba onomgomo apho, ohlukeneyo nombonisi-umzimba apho umbonisi angenza khona - umzekelo, ugqirha unyanga isigulane. Umzekelo wesibini ngumbono wokuqala womntu obona i-soma apha phantsi: okuthi, ngokwakho - i-soma yakhe, enokusebenza kwayo, ngokwabo. I-soma ke ngoko, umzimba ubonwa ngaphakathi.
Imfundo yeSomatic, ngamanye amazwi, kukuphucula ukuqonda komzimba ukufumana ukulawula ngokuzithandela kweenkqubo ezithile zomzimba. Kuyi-somatic ngendlela yokuba ukufunda kwenzeka ngaphakathi komntu njengenkqubo yangaphakathi. Ndingafuna ukuqinisekisile le mlinganiso, kodwa ndicinga ukuba yile ndlela i-yoga isebenza ngayo. Uhlakulela indlela yokukhusela evela ngaphakathi ekuchaseni uxinzelelo okanye isifo, kunokuba uziqiniseke ngaphandle ngaphandle kokusetyenziswa okungalawulwayo kweziyobisi, i-multivitam, kunye nezinto zonke ezingaphezulu kwezinto.
Xa uziphilisa ngaphakathi, unyango lufumana intsingiselo eyahlukileyo - kwaye uvumele ukuba luhambe ngokutshintsha kwiparadigm. Ukutshintshwa kuvela kwiyeza-njengendlela yokungenelela kwenye yokuziphilisa. Ukuziphilisa kunakho, kwaye kaninzi imigaqo emitsha. Oku mhlawumbi kutheni abantu bathi "bafumene" ubomi obutsha emva kokuba baqalise ukwenza i-yoga. Oko bakubiza ngokuba ukufumanisa, eqinisweni, ukuguqulwa kweparadim, oko bekungakwazi ukuyiqonda ngaphambili.
"Ukufumanisa" kwalolu hlobo kuvela ukuqonda ukuba umzimba womntu awuyena nje umatshini ozele izitho ezahlukileyo eziya kufuna ukulungiswa kweso sihlandlo ukuba kukho konke okungahambi kakuhle, kodwa luyinto ebalulekileyo esebenza kwiinkonzo ezixakekileyo zeemvakalelo, iingcamango, iingcamango , iimfuno, iimfuno kunye neengcinga.
Zizo zixhobo ezifihlakeleyo, ezinokuthi zikuncede uphile kwaye uqonde ubomi obungcono, kunokuba izitho ezihlukeneyo ezingahlaliyo zibeke kwaye ziyenze oko kufuneka ziyenze imihla ngemihla, nganye iiyure, nganye imizuzu, kunye nesibini. Beka ngokungafaniyo, ingqondo yakho kunye neeparadims zayo kwaye akusiyo umzimba okunceda ufikelele kakuhle.
UDkt. Sanjay Parva wayeyingxenye yeYunivesithi yaseRochester ñ Iqela labaphandi beMedia Lab Asia ye-Rapid Assessment Procedure (RAP) ngo-2002, isicwangciso sokudibanisa idijithali esazama ukubonelela ngexesha eli-Ayurvedic kunceda abantu abakwiindawo ezikude zaseNdiya. Ezinye zeendaba ezidumileyo ezisebenzayo zibandakanya: I-Asian Journal ye-Pediatric Practice, i-Asian Journal ye-Obstetrics & Gynecology, i-Asian Journal ye-Clinic Cardiology, i-Asian Journal yeSifo seSabetology, i-Medinews kunye ne-Journal of Renal Sciences.
Yintoni uSudanic Smudging?
Izifundo zoBomi endazifunda kuMama
Iingelosi ze-Atlantis Oracle Cards
UkuCima i-Out stress kwi-Reflexology
UShakespeare Unyaka omtsha kunye neKrismesi Quotes
Kuphi iTiger Woods eya esikolweni esiphakeme? (Ngaba WayeseGoli leGalofu?)
Iimoto ezininzi kakhulu zehlabathi
Ikhalenda yamaKatolika yeLaturgical for Advent
IYunivesithi yaseMississippi i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Fumana Imbali Yentsapho KwiiRekhodi zaseKhaya zoLondolozo
Iingcebiso zoLawulo lwexesha kubaFundi abaPhumeleleyo
Mars kwi Astrology
Indlela yokuchazwa ngeeDatter Exchange Rate Charts
Iingxowankulu ezingama-25 ze-Hip-Hop Trends
Iingcebiso ezili-10 malunga nendlela yokugcina igesi kwiSithuthuthu
Ukulwa kweBull Run: Ihlobo le-1861 iNtlekele ye-Army Union